သားသားမီးမီးတို့အကြိုက် အရသာရှိပြီး အားဖြစ်စေမည့် Snack များ - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
သားသားမီးမီးတို့အကြိုက် အရသာရှိပြီး အားဖြစ်စေမည့် Snack များ0198
မိဘတွေအတွက် သားသားမီးမီးလေးတွေဆိုတာ ရတနာတစ်ပါးပါပဲ။ ဒီတော့ သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် အာဟာ ဖြစ်စေမည့် ဘယ်လို အစားအစာတွေဝယ်ကျွေးရမလဲဆိုတာ အမြဲတမ်းတွေးနေတတ်တာအမှန်ပါပဲ။ ကဲအဲ့တာဆိုရင် ခလေးတွေအတွက် အဆာပြေစားဖို့သင့်တော်တဲ့ အဆာပြေမုန့်တွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
Mug Baby Noodles
ဒီ Mug Baby Noodles တွေကတော့ ခလေးငယ်တွေအတွက် သီးသန့်စားသောက်လို့ရတဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်အမျိုးအစားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေနွေးနဲ့ပြုတ်သောက်ရုံအပြင် ခလေးတွေအကြိုက်အမယ်လေးတွေလဲပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ ဟင်းအမယ်လေးတွေကလဲ ခလေးတွေအကြိုက်တွေ့စေမယ် ချစ်စရာ အရုပ်လေးတွေလဲပါဝင်တဲ့အတွက် ခလေးတွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် ခေါက်ဆွဲထုတ်လေးပါပဲ။
Mellin Baby Pasta
ဒါလေးကတော့ သားသားမီးမီးတွေကို ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးလုပ်ကျွေးချင်တဲ့မိဘတွေအတွက်‌ သင့်တော်တဲ့ သားသားမီးမီးတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Pasta မုန့်လေးပါပဲ။ ဒီမုန့်လေးဟာဆိုရင် အရမ်းလဲအချိန်မကုန်ပဲအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတဲ့အပြင် အခြားအဆာပလာတွေထည့်စရာလဲမလိုပါဖူး။
ဒီ Animal Biscuit လေးတွေကတော့ နို့ဘီစကစ်အရသာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘီစကစ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းလဲမမာ အရမ်းလဲ မပျော့တဲ့အတွက် သားသားမီးမီးလေးတွေရဲ့ သွားလေးတွေကို နာကျင်စေမှာမဟုတ်ပါဖူး။ နို့နဲ့ပဲဖျော်စားစား၊ မိုင်လိုနဲ့ပဲတို့စားစား အလွန်မှလိုက်ဖက်လှတဲ့ ဘီစကစ်လေးပါ။ ပြီးတော့ Animal Biscuit ဆိုတဲ့အတိုင်း တိရိစ္ဆာန် အမျိုးမျိုးနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့အတွက် မုန့်လေးကျွေးရင်း အကောင်လေးတွေရဲ့ အကြောင်းပါသင်ပေးလို့ရပြီပေါ့။
OHGIYA Cheese Snack
Ohgiya Cheese Snackဟာဆိုရင် Cheese Snack အရသာကိုမှ almond အသီးကိုပါ ထည့်ထားတဲ့အတွက် ကလေးငယ်တွေရဲ့ အရိုးအဆစ်နှင့်ဉာဏ်ရည်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပါတယ်။ Almond (ဗာဒံစေ့) ပါဝင်တဲ့အတွက် သားသား မီးမီးတို့ရဲ့ အဆီအတောက် ဖြစ်စေတဲ့ ဝိတ်ကိုပါ ဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သားသားမီးမီးတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Cheese အရသာလေးလဲဖြစ်ပြီး ဘယ်သွားသွား အဆင်သင့်ထုတ်စားလို့ရတဲ့အတွက် အဆာပြေစားဖို့အသင့်တော်ဆုံး Snackလေးပါပဲ။
ဒါတွေအပြင်ကိုမှ သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် အခြား အဆာပြေမုန့်လေးတွေကိုလဲဝယ်ယူလို့ရပါသေးတယ်။
Previous ArticleShop ရဲ့ (၆)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် Shop Anniversary မှာ ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေပါဝင်လာမှာလဲ?Next ArticleTelevision တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်များများသင်လေ့လာဖူးသလဲ?
❄Air con ကို မီတာခ အရမ်းမကုန်အောင်ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ?❄ 3772
သင့်ရဲ့ ဝါသနာကို အခုပဲရှာဖွေလိုက်ကြရအောင်…. 3045
သင်ဟာ မိတ်ကပ်တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြည့်လိုက်ပါဦး? 1999
အိမ်မှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ် Printer လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလား? 🤔 1981
လက်ပတ်နာရီတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်လိုက်ပါ!! 1813